Iinjongo zeNtengiso yedijithali ye-B2014B 2, uHlahlo-lwabiwo mali, imisebenzi kunye nemiceli mngeni | Martech Zone
NgeCawa, ngoSeptemba 14, 2014 NgeCawa, ngoSeptemba 14, 2014 Douglas Karr
Omobono's yamva nje Yintoni esebenzayo phi uphando lubonisa umfanekiso ocacileyo Intengiso yedijithali ye-B2B ngo-2014. Ngokubambisana ne Umbutho weNtengiso kwaye Isangqa noPhando, babuze abarhwebi abaphezulu abali-115 ngentengiso yabo yedijithali iinjongo, uhlahlo-lwabiwo mali, imisebenzi kunye nemiceli mngeni. Ingxelo epheleleyo, kubandakanya iziphumo zophando, uhlalutyo lweengcali kunye neengcebiso, ziya kupapashwa kule nyanga. Ukufumana ikopi yakho yedijithali nje ukuba ifumaneke, nceda sayina kwindawo ka-Omobono.
Iziphumo eziphambili ezivela kwingxelo zezi zilandelayo:
Izinto eziphambili ngokubaluleka kweB2B Kwi-Intanethi iinkokeli ezicingelwayo, ubudlelwane babathengi kunye nokwazisa ngebrand.
Uhlahlo-lwabiwo mali lweB2B ixhasa kakhulu intengiso yedijithali nge-39% yohlahlo-lwabiwo mali ngokubanzi.
Iindlela eziphambili zeNtengiso zeB2B Ngamajelo asekuhlaleni kunye neselfowuni.
Imiceli mngeni yokuThengisa ye-B2B zibandakanya ukunqongophala kwezixhobo, ukulinganisa ukusebenza ngokukuko kunye nokusilela kobungcali endlini.
Izikhewu kwiZakhono zoThengiso zeB2B are kubahlalutyi kunye nokwenza ingxelo, isicwangciso kunye nocwangciso, kunye nophando kunye nokuqonda.
Ukulinganisa i-B2B yeNtengiso ye-ROI iyaqhubeka nokuba ngumceli mngeni, nge-16% yabathengisi abavakalelwa kukuba balinganisa ngokuchanekileyo imbuyekezo kutyalo-mali.
Isishwankathelo seziphumo eziphambili zika-Omobono yile infographic ingezantsi:
tags: b2bUhlahlo-lwabiwo mali lwe-b2bIntengiso yedijithali ye-b2bUkuthengisa kwe-b2bb2b imisebenzi yokuthengisab2b uhlahlo lwabiwo malib2b yemiceli mngeni yokuthengisab2b iinjongo zokuthengisaIzinto eziphambili ngokubaluleka kwi-b2bb2b imidiya yoluntub2b iingcinga zobunkokhelikwi-infographicumona